ချစ်သူ ၊ လင်မယားတွေကြားထဲမှာ ဒီလိုအကျင့်တွေရှိနေရင် ပျော်ရွှင်နေရမှာ သေချာ ..! - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / ချစ်သူ ၊ လင်မယားတွေကြားထဲမှာ ဒီလိုအကျင့်တွေရှိနေရင် ပျော်ရွှင်နေရမှာ သေချာ ..!
ချစ်သူ ၊ လင်မယားတွေကြားထဲမှာ ဒီလိုအကျင့်တွေရှိနေရင် ပျော်ရွှင်နေရမှာ သေချာ ..!
Apann Pyay 8:33 AM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
တွေ့လိုက်တိုင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ခင်ပြီး အမြဲပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ စုံတွဲတွေ မြင်ဖူးပါလိမ့်မယ် ။ ချစ်သူဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေပါမယ် ။ တွေ့လိုက်တိုင်း သတ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနေ်ာ ။ အမြဲပျော်ရွှင် ချစ်ခင်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေမှာ ဒီလိုအကျင့်စရိုက်လေးတွေ ရှိနေကြပါတယ် ။ ဒီအကျင့်စရိုက်လေးတွေထဲက အနည်းဆုံး ၂ချက်လောက် ရှိတယ်ဆိုရင်တောင် ပျော်ရွှင်ရဖို့ သေချာပါတယ်တဲ့နေ်ာ ။
ဒီအချက်ကတော့ လင်မယားတွေနဲ့ ပိုပြီးသင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ် ။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ အိပ်ရာဝင်ချိန်ကတော့ အတူတူဖြစ်သင့်ပါတယ်နော် ။ ဒါမှသာ တစ်စုံတစ်ဦးစိတ်ထဲမှာ အထီးကျန်မှုမရှိဘဲ ပျော်ရွှင်နေရမှာပါနေ်ာ ။ ချစ်သူတွေဆိုရင်လည်း ဖုန်းဆက်ပြီး အိပ်ရာတူတူဝင်လို့ ရပါတယ် (နင်လည်းအိပ်တော့ ၊ ငါလည်းခုအိပ်မယ်..အဲ့လိုမျိုးပေါ့ :D )
အကျင့်စရိုက်ချင်း ၊ ဝါသနာချင်း သိပ်မတူရင်တောင် နှစ်ယောက်အတူတူရှိနေချင်တာကတော့ အတူတူပဲ ဆိုတာမျိုးပေါ့ ။ နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ထဲမှာ ဒီလိုတွေဆိုရင် ဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်သလဲနော် ။
တကယ်ပျော်ရွှင်ပြီး ချစ်ခင်ကြင်နာကြတဲ့ စုံတွဲတိုင်း လမ်းလျှောက်ရင် အဲ့လိုအမြဲ တတွဲတွဲပါ ။ ချစ်သူရည်းစားဘဝမှာ သာမက လင်မယားဘဝရောက်သွားရင်လည်း လမ်းလျှောက်ရင် လက်လေးတွဲတာ ၊ လက်ချိတ်တာ ၊ ပုခုံးဖက်တာ ၊ ခါးဖက်တာ စသဖြင့် တစ်ခုခုတော့ လုပ်ကြပါတယ် ။ ဒါဟာ သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝေးကွာနေလို့မရဘူးဆိုတာကို ပြနေတာပါပဲ ။
၄။ယုံကြည်တယ် ၊ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိပါတယ် ။ အမှားတွေပြုလုပ်မိရင်တောင် ခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက် အဆင်သင့်ပါပဲ ။ လူတိုင်း လက်ခံနိုင်တဲ့ အမှားမျိုးတော့ ဖြစ်ရမှာပေါ့ ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မယုံသင်္ကာဖြစ် ၊ သံသယဝင်နေကြတဲ့ အတွဲတွေ တစ်ပါတ်ကို ၆ရက်လောက်က ရန်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။
တစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက် ၊အမှားကို အမြဲလိုက်ထောက်မနေဘဲ ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကို ပိုပြီး မြင်ပေး ၊ လက်ခံပေးတတ်ကြပါတယ် ။ ဒါဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက် တကယ်ကို စိတ်ချမ်းသာရမယ့် အကျင့်စရိုက်လေးပါ ။ ဆိုးတာကို ဖိနေမယ့်အစား ကောင်းတာကို ချီးမွမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါ တစ်ဖက်လူကလည်း ပိုပြီးကောင်းအောင် နေချင်လာပါတယ် ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ မကောင်းတာကိုချည်း ခဏခဏပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဖက်လူအတွက် စိတ်ဒဏ်ရာရသလို ၊ အရွဲ့တိုက်တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။
၆။ တွေ့ဆုံတိုင်း ဖက်ထားကြတယ်
ပျော်ရွှင်ရတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ သူတို့တွေ့တိုင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖက်ထားတတ်ကြတယ်တဲ့ ။ အမြဲတမ်းကြီး ဖက်နေတယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဆုံကြတဲ့ နေ့ရက်တိုင်းတော့ ဖက်ထားတတ်ကြတယ် ။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ ချစ်ခင်ကြင်နာမှု ၊ လိုအပ်မှုကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖွင့်ဟပြချင်ပါပဲ ။ ဒီလို ဖက်တွယ်တတ်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် နွေးထွေးမှုလည်း ရှိကြတယ် ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်တယ်လို့ နေ့တိုင်း ပြောလေ့ရှိပါတယ် ။ မပြောဖြစ်တဲ့ နေ့ဆိုတာ မရှိသလောက် ရှားပါတယ် ။ မတွေ့ဖြစ်ရင်တောင် စာပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေ ဖုန်းဆက်၍ဖြစ်စေ ပြောကြပါတယ် ။ သတိရရင်ရသလိုလည်း ပြောတတ်ပါသေးတယ်တဲ့ ။
၂၄နာရီ ဘယ်သူ့မှ အချိန်ပြည့် ချစ်မနေနိုင်ပါဘူး ။ အလုပ် ၊ မိသားစု ၊ လူမှုရေး စတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ လည်ပတ်နေရတဲ့ ဘဝမှာ နှစ်ဦသားအတွက် သီးသန့်အချိန်ဆိုတာ မရှိမဖြစ်ပါပဲ ။ တကယ်ပျော်ရွှင်ရတဲ့ စုံတွဲတိုင်းမှာ သူတို့အတွက် သီးသန့်အချိန်လေးတစ်ခုတော့ မဖြစ်မနေ ဖန်တီးတတ်ကြပါတယ် ။ ဘယ်အရာက အရေးကြီးဆုံးဆိုတာကို သူတို့စိတ်ထဲမှာ နားလည်သဘောပေါက်ပြီးသားပါ ။
ကိုယ့်ချစ်သူအတွက် ကိုယ်ဂုဏ်ယူကြပါတယ် ။ ဘယ်သူ့ရှေ့မှာမဆို မိတ်ဆက်ပေးရဲပါတယ် ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လည်း ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရလို့ (သို့) လက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့လို့ ကံကောင်းတယ် ၊ ဝမ်းသာတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း မကြာခဏပြောလေ့ရှိပါတယ် ။
ကဲ..အပေါ်ကအချက်တွေထဲမှာ ကိုယ်နဲ့တူတာ ဘယ်နှစ်ချက်များ ရှိနေမလဲဆိုတာ ပြောသွားကြပါဦးနော်
တှလေို့ကျတိုငျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ခဈြခငျပွီး အမွဲပြျောရှငျနကွေတဲ့ စုံတှဲတှေ မွငျဖူးပါလိမျ့မယျ ။ ခဈြသူဆိုတာ ဒီလိုမြိုးပဲဖွဈနပေါမယျ ။ တှလေို့ကျတိုငျး သတျနရေတယျဆိုရငျတော့ သိပျတော့မဟုတျပါဘူးနျော ။ အမွဲပြျောရှငျ ခဈြခငျကွတဲ့ စုံတှဲတှမှော ဒီလိုအကငျြ့စရိုကျလေးတှေ ရှိနကွေပါတယျ ။ ဒီအကငျြ့စရိုကျလေးတှထေဲက အနညျးဆုံး ၂ခကျြလောကျ ရှိတယျဆိုရငျတောငျ ပြျောရှငျရဖို့ သခြောပါတယျတဲ့နျော ။
ဒီအခကျြကတော့ လငျမယားတှနေဲ့ ပိုပွီးသငျ့တျောမယျထငျပါတယျ ။ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ဖွဈစေ အိပျရာဝငျခြိနျကတော့ အတူတူဖွဈသငျ့ပါတယျနျော ။ ဒါမှသာ တဈစုံတဈဦးစိတျထဲမှာ အထီးကနျြမှုမရှိဘဲ ပြျောရှငျနရေမှာပါနျော ။ ခဈြသူတှဆေိုရငျလညျး ဖုနျးဆကျပွီး အိပျရာတူတူဝငျလို့ ရပါတယျ (နငျလညျးအိပျတော့ ၊ ငါလညျးခုအိပျမယျ..အဲ့လိုမြိုးပေါ့ :D )
အကငျြ့စရိုကျခငျြး ၊ ဝါသနာခငျြး သိပျမတူရငျတောငျ နှဈယောကျအတူတူရှိနခေငျြတာကတော့ အတူတူပဲ ဆိုတာမြိုးပေါ့ ။ နှဈယောကျစလုံးစိတျထဲမှာ ဒီလိုတှဆေိုရငျ ဘယျလောကျခဈြဖို့ ကောငျးလိုကျသလဲနျော ။
တကယျပြျောရှငျပွီး ခဈြခငျကွငျနာကွတဲ့ စုံတှဲတိုငျး လမျးလြှောကျရငျ အဲ့လိုအမွဲ တတှဲတှဲပါ ။ ခဈြသူရညျးစားဘဝမှာ သာမက လငျမယားဘဝရောကျသှားရငျလညျး လမျးလြှောကျရငျ လကျလေးတှဲတာ ၊ လကျခြိတျတာ ၊ ပုခုံးဖကျတာ ၊ ခါးဖကျတာ စသဖွငျ့ တဈခုခုတော့ လုပျကွပါတယျ ။ ဒါဟာ သူတို့တှရေဲ့ စိတျထဲမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဝေးကှာနလေို့မရဘူးဆိုတာကို ပွနတောပါပဲ ။
၄။ယုံကွညျတယျ ၊ ခှငျ့လှတျနိုငျစှမျးလညျးရှိတယျ
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ယုံကွညျမှု အပွညျ့ရှိပါတယျ ။ အမှားတှပွေုလုပျမိရငျတောငျ ခှငျ့လှတျဖို့အတှကျ အဆငျသငျ့ပါပဲ ။ လူတိုငျး လကျခံနိုငျတဲ့ အမှားမြိုးတော့ ဖွဈရမှာပေါ့ ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မယုံသင်ျကာဖွဈ ၊ သံသယဝငျနကွေတဲ့ အတှဲတှေ တဈပါတျကို ၆ရကျလောကျက ရနျဖွဈနတေတျပါတယျ ။
တဈယောကျရဲ့ အားနညျးခကျြ ၊အမှားကို အမွဲလိုကျထောကျမနဘေဲ ကောငျးတဲ့အခကျြလေးတှကေို ပိုပွီး မွငျပေး ၊ လကျခံပေးတတျကွပါတယျ ။ ဒါဟာ နှဈဦးနှဈဖကျစလုံးအတှကျ တကယျကို စိတျခမျြးသာရမယျ့ အကငျြ့စရိုကျလေးပါ ။ ဆိုးတာကို ဖိနမေယျ့အစား ကောငျးတာကို ခြီးမှမျးပေးလိုကျတဲ့အခါ တဈဖကျလူကလညျး ပိုပွီးကောငျးအောငျ နခေငျြလာပါတယျ ။ ဒီလိုမဟုတျဘဲ မကောငျးတာကိုခညျြး ခဏခဏပွောနမေယျဆိုရငျတော့ တဈဖကျလူအတှကျ စိတျဒဏျရာရသလို ၊ အရှဲ့တိုကျတာမြိုးတှလေညျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ ။
၆။ တှဆေုံ့တိုငျး ဖကျထားကွတယျ
ပြျောရှငျရတဲ့ စုံတှဲတှဟော သူတို့တှတေို့ငျးမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဖကျထားတတျကွတယျတဲ့ ။ အမွဲတမျးကွီး ဖကျနတေယျလို့ ပွောတာမဟုတျပါဘူး ။ ဆုံကွတဲ့ နရေ့ကျတိုငျးတော့ ဖကျထားတတျကွတယျ ။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ ခဈြခငျကွငျနာမှု ၊ လိုအပျမှုကို တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဖှငျ့ဟပွခငျြပါပဲ ။ ဒီလို ဖကျတှယျတတျကွတဲ့ စုံတှဲတှဟော တဈယောကျအပျေါတဈယောကျ နှေးထှေးမှုလညျး ရှိကွတယျ ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ခဈြတယျလို့ နတေို့ငျး ပွောလရှေိ့ပါတယျ ။ မပွောဖွဈတဲ့ နဆေို့တာ မရှိသလောကျ ရှားပါတယျ ။ မတှဖွေ့ဈရငျတောငျ စာပို့ပွီးတော့ဖွဈစေ ဖုနျးဆကျ၍ဖွဈစေ ပွောကွပါတယျ ။ သတိရရငျရသလိုလညျး ပွောတတျပါသေးတယျတဲ့ ။
၂၄နာရီ ဘယျသူ့မှ အခြိနျပွညျ့ ခဈြမနနေိုငျပါဘူး ။ အလုပျ ၊ မိသားစု ၊ လူမှုရေး စတဲ့ ကိစ်စတှနေဲ့ လညျပတျနရေတဲ့ ဘဝမှာ နှဈဦသားအတှကျ သီးသနျ့အခြိနျဆိုတာ မရှိမဖွဈပါပဲ ။ တကယျပြျောရှငျရတဲ့ စုံတှဲတိုငျးမှာ သူတို့အတှကျ သီးသနျ့အခြိနျလေးတဈခုတော့ မဖွဈမနေ ဖနျတီးတတျကွပါတယျ ။ ဘယျအရာက အရေးကွီးဆုံးဆိုတာကို သူတို့စိတျထဲမှာ နားလညျသဘောပေါကျပွီးသားပါ ။
ကိုယျ့ခဈြသူအတှကျ ကိုယျဂုဏျယူကွပါတယျ ။ ဘယျသူ့ရှမှေ့ာမဆို မိတျဆကျပေးရဲပါတယျ ။ တဈယောကျကိုတဈယောကျလညျး ခဈြသူဖွဈခှငျ့ရလို့ (သို့) လကျထပျခှငျ့ရခဲ့လို့ ကံကောငျးတယျ ၊ ဝမျးသာတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး မကွာခဏပွောလရှေိ့ပါတယျ ။
ကဲ..အပျေါကအခကျြတှထေဲမှာ ကိုယျနဲ့တူတာ ဘယျနှဈခကျြမြား ရှိနမေလဲဆိုတာ ပွောသှားကွပါဦးနျော